सुन्तलीको पीडा ! धेरैबर्ष नागरिकता माग्दा कुटिईन्,अहिले घरमै नागरिकता पाइन (भिडियो) | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार सुन्तलीको पीडा ! धेरैबर्ष नागरिकता माग्दा कुटिईन्,अहिले घरमै नागरिकता पाइन (भिडियो)
सुन्तलीको पीडा ! धेरैबर्ष नागरिकता माग्दा कुटिईन्,अहिले घरमै नागरिकता पाइन (भिडियो)
२०७५, ३ भाद्र आईतवार ०७:२४
बेनी नगरपालिका–७ मंगलाघाटकी ईश्वरी श्रेष्ठ (सुन्तली) को गाला चाउरी परेका छन्, केश फुलेको छ । विवाह गरेको केहीबर्षमै श्रीमानसंग सम्बन्ध टुटेपछि मानसिक सन्तुलनमा समेत गडबडी भएपछि आफन्तले समेत बेवारिसे जस्तै छोड्ने गरेका थिए । मानसिक रोग,मधुमेहबाट पीडित ईश्वरीले चारदशक अगाडी देखी नागरिकताका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउने गरेकी थिईन् ।
नागरिकतालाई पटक–पटक निवेदन दिदाँ ६० बर्षको उमेर पार गर्दा समेत श्रेष्ठको नागरिकता हातमा परेको थिएन् । मानसिक रोगलाई कमजोरीको रुपमा लिदै आफन्त र प्रशासनले समेत नागरिकता दिन आनकानी गरिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी शुक्रबार घरमै पुगेर नागरिकता उपलब्ध गराएको छ ।
नागरिकता नभएकै कारण नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट बन्चित भएकी श्रेष्ठलाई वडा कार्यालयको सिफारिसमा घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलादेवी अर्यालले बताईन् ।‘उहाँले नागरिकतालाई धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो,‘नागरिकता पाएपछि दंग पर्नुभयो’ अर्यालले भनिन् ।उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर दुर्गम क्षेत्रमा समेत नागरिकता वितरण गर्ने गरिएको बताईन् । आफुँले पाएको नागरिकता उनले ९५ बर्षिय पिता देविप्रसादलाई समेत देखाईन् ।
‘घरमै पुगेर नागरिकता दिदाँ जिम्मेबारी पुरा गरेको महसुुस भयो,‘नागरिकता नभएकै कारण उहाँले धेरै सेवासुविधा गुमाउनुभएको छ’ उनले भनिन् । प्रशासन कार्यालयले एकबर्ष कार्ययोजनामा कानुनी प्रक्रिया भएपनि नागरिकताबाट बन्चित भएकालाई वडा कार्यालयसंग समन्वय गरी नागरिकता वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । घरमै नागरिकता पाएपछि श्रेष्ठले बल्ल आफ्नो सपना पुरा भएको बताइन्।‘मैले अव सरकारी भत्ता खान पाउँछु,‘बल्ल नेपाली भएको महसुस गरे’ श्रेष्ठले भनिन् ।
उनले मानसिक रोगीका कारण नागरिकताको खोजीमा धेरैपटक कुटाई पनि खाएकी थिइन् । श्रेष्ठका भाई भिमनारायणले समेत नागरिकता बनाउन सघाएका थिए । विगतमा घर परिवारबाटै उनले नागरिकताका लागि सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेकी थिईन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले विकट र यातायात नपुगेका गाउँमा सेवालाई प्राथमिकता दिएपनि सदरमुकाम बेनी आसपासमै समेत नागरिकताबाट बन्चित भएको भेटिएपछि चासो देखाएको बताए ।
‘नागरिकता नेपालीको सम्पत्ती हो,‘समान्य प्रक्रियाका बारेमा समेत जानकारी नभएकाले पनि अलमलमा परेको देखिन्छ’ उनले भने । विकट भौगोलिक अवस्था, अशिक्षाका कारण सरकारीस् सेवाबाट बञ्चित भएका नागरिकलाई घुम्ती सेवाबाटै भएपनि सेवा उपलब्ध गराउने बताए । प्रजिअ अधिकारीले प्रशासन भित्र स्तनपान कक्ष, २० दिनमै राहदानी, प्रशासन भित्रैबाट निशुल्क सिफारिस तथा गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्ने गरेका थिए । नगर तथा गाउँपालिका, वडा कार्यालयबाट समेत सरकारी सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर संवाद सहितका कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।
श्रेष्ठलाई घरमै नागरिकता हस्तान्तरण गदैं सहायक प्रजिअ लिलादेवी। तस्वीर हरिकृष्ण
Previous articleविलबाङपहिरो पीडितलाई तरुण दलको सहयोग
Next articleयूवाको सक्रियतामा बेनी–अर्थुङ्गे मर्मत